एनआरएनए अध्यक्षमा कुमार पन्त विजयी, बिजयीहरुको नामावली सहित - आर्थिक पाटी
२०७६-०७-१ बिचार / प्रतिक्रिया
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्त निर्वाचित भएका छन् । संघको नयाँ कार्यकालका लागि बिहीबार भएको निर्वाचनमा आफ्ना प्रतिस्पर्धी कुल आचार्यलाई परास्त गर्दै पन्त विजयी बनेका हुन् ।
मतगणना सकिए पनि मतपरिणाम भने औपचारिक रूपमा घोषणा हुन बाँकी छ । गोरखा फुजेलका स्थायीबासिन्दा पन्त सन् सन् १९९९ देखि जर्मनीमा व्यवसायरत् छन् । पन्त यसअघि एनआरएनएको दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष थिए ।
पन्तले आफू उम्मेदवार हुँदै गर्दा लगानीमा योगदान, सम्मानपूर्ण वैदेशिक रोजगारी, नागरिकता र मतदानको अधिकार, दिगो संगठन र व्यापक सहभागिताका पाँच मन्त्रसमेत सार्वजनिक गरेका थिए । उनले आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उपाध्यक्षमा मिश्रित परिणाम आएको छ । उपाध्यक्षका लागि भएको निर्वाचनमा बद्री केसी, अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, सोनम लामा, मन केसी र रविना थापा विजयी भएका छन् । उपाध्यक्षमा विजयी भएका केसी र थापा कूल आचार्य प्यानलका हुन् ।
महासचिवमा डा. हेमराज शर्माले जितेका छन् । त्यस्तै, सचिवमा गौरी जोशी, र आरके शर्मा विजयी भए । कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्षमा क्रमशः महेश श्रेष्ठ र लोक दाहाल चयन भएका छन् ।
अध्यक्ष ː कुमार पन्त
उपाध्यक्ष ː बद्री केसी
उपाध्यक्ष ː अर्जुन कुमार श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष ː सोनम लामा
उपाध्यक्ष ː मन केसी
उपाध्यक्ष ː रविना थापा
महासचिव ː डा. हेमराज शर्मा
सचिव ː गौरी जोशी
सचिव ː आरके शर्मा
कोषाध्यक्ष ː महेश श्रेष्ठ
सह कोषाध्यक्ष ː लोक दाहाल